Home FAMPIASANA CLASSIC Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Lehilahy Legend United Legend izay malaza amin'ny anarana; "Ferdz". Ny tantaranay momba ny tantaran'ny tantaram-pahaterahana Rio Verde dia mitantara ny zava-misy mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra firy momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony amin'ny maha-mpanohitra azy ny Legendary, saingy vitsy no mihevitra ny Bio Rio de Janeiro izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Rio Ferdinand Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Rio Gavin Ferdinand dia teraka tamin'ny 7th ny volana novambra 1978 tao amin'ny Hopitaly College College any London, Grande-Bretagne. Izy dia teraka tamin'ny renin'i Irène farany teo, Janice Lavender sy ny rainy Saint Lucian, Julian Ferdinand. Ny renin'i Ferdinand ihany no 17 fony izy nanana azy. Nihalehibe niaraka tamin'ny zandriny lahy, Anton tao Peckham i Ferdinand. Na izany aza dia nanana fianakaviana be izy.
Niasa mafy ireo ray aman-dreny rehetra mba hanohana ny fianakaviana. Tamin'izany fotoana izany, ny reniny taloha dia zaza nateraky ny zaza ary ny rainy dia toy ny mofomamy. Hambara ny fahamarinana. Tsy nanambady ireo ray aman-drenin'i Ferdy ary nisaraka tamin'izy ireo tamin'ny 14 taona. Talohan'ny nanavahana, nampanantena ny hanaraka ny zanany hatrany ny antoko roa.
Ny rain'i Ferdy, Julian izay nikarakara ny zanany. Nanosika ny fianakaviany tany amin'ny tany iray tsy lavitra teo izy. Amin'ny maha-fomba fitaterana azy, dia raisiny tanora i Rio Ferdinand ho fampiofanana baolina kitra sy ho an'ny valam-paritra eo an-toerana. Izany dia satria i Ferdy kely no namolavola ny fahalianan'ny baolina kitra tamin'io fotoana io. Na dia teo aza ny fitiavany ny baolina kitra, dia mbola fitsipika ihany ny fanabeazana.
Little Ferdy dia nanatrika ny sekoly fanabeazana fototra Camelot. Tany am-pianarana dia nifantoka tamin'ny matematika izy ary indray andro, dia nanararaotra nanararaotra nanatrika teo anoloan'ny mpanatrika izy nandritra ny famokarana ny bokin'i Bugsy Malone. Amin'ny teniny ..."Raha mbola te hanao zavatra hafa foana aho dia te-ho mora kivy - na dia milalao baolina kitra na mihantona aza miaraka amin'ny vadiko. Mialà eo an-tokantrano, mitadiava olona vaovao. ... Tiako izany.
Nifidy ny hanatrika ny Blackheath Bluecoat School i Little Ferdy taty aoriana mba hanao namana vaovao sy hipetraka tsara, ary nahatsapa ny fahatokisany araka ny hita etsy ambany.
Naneho fitenenana ara-batana i Ferdinand, nandray anjara tamin'ny kilasy fianarana baolina kitra sy gymnastics fa koa tantara an-tsehatra, teatra ary ballet. Izy dia ankizy afaka nahazo vatsim-pianarana: izy no solontenan'i Southwark amin'ny gymnastics ao amin'ny Lalao Tanora ao London. Ny tsara indrindra, tamin'ny taona 10, dia nasaina nanofana tao amin'ny academy Queens Park Rangers izay nanesorana ny nofinofin'ny baolina kitra.
Ny fahaiza-manaon'ny baolina kitra nataon'i Ferdinand dia hita niharihary na dia fony mbola zaza aza: fony izy 11 taona, dia nanamarika ny mpanazatra azy, David Goodwin: "Handeha hiantso anao Pelé aho, zanaka, tiako ny lalao." I Ferdinand dia nanomboka tamin'ny maha-mpilalao baolina miditra an-tsehatra azy, na izany aza, ny mpilalao ny scout dia nahita ilay mpilalao tanora nanana ny mety ho vahaolana ara-batana ho ivon-toerana.
Ny ekipan'i Londres, West Ham United, dia tokony ho ny baolina kitra baolina kitra, kanefa dia niditra tao amin'ny rafitra tanora tao 1992 izy. Tao amin'ny 1994 dia nilalao izy Frank Lampard. Nandroso tamin'ny lahatahiry tanora i Ferdy ary nanao ny laharam-boninahitra Premier League tamin'ny 1996. Ny fahamatorana feno dia tonga taorian'ny fampindramam-bola amin'ny biletà ho an'i Bournemouth ary nafindra tany Leeds United. Izany dia nahatonga an'i Manchester United hanome azy antso tany 2002. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Rio Ferdinand Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Rio dia manambady an'i Rebecca Ellison vadiny. Izy dia mpanazatra ara-pahasalamana teo aloha izay nifanena tamin'ny mpilalao baolina Rio Ferdinand raha mbola nilalao tao amin'ny West Ham izy tamin'ny faran'ny 1990.
Nanjavona i Ferdinand rehefa nodimandry i Rebecca vady malalany, tamin'ny 2015, taona teo ho eo 34. Ahoana anefa no nahafatesany? Ary inona ny tantarany? Mijery ny fiainany izahay ...
Tany am-boalohany tany Essex, nitazona ny sariny ambany izy ary nampiofana mpitandro ny filaminana alohan'ny nanambadiany an'i Rio tamin'ny 2009. Rio sy Rebecca vadiny dia efa nanambady tany Karaiba.
Izy no niteraka ny lahimatoa lahimatoan'i Lorenz tao 2006 ary ny zanaka lahy faharoa antsoina hoe Tate dia nanaraka telo taona taty aoriana. Nandray vehivavy vavy antsoina hoe Tia tao amin'ny 2011 izy ireo tamin'ny fotoana iray dia niverina indray tany Londres ny fianakaviana taorian'ny fanadihadiana iray tany Manchester rehefa nilalao i United.
Talohan'ny nahafatesany dia nitazona ny aretiny i Rebecca taorian'ny nahitana aretina homamiadana tao 2014. Taorian'ny fitsaboana dia nihevitra izy fa mazava tsara ny aretina ao amin'ny 2014. Mampalahelo fa niverina ny taovam-pananahana ary nanaparitaka ny taolany. Rehefa nanambara ny fahafatesany dia nanosika ny fielezan'ny alahelo tamin'ny tontolon'ny baolina kitra.
Rio dia nanamafy ny fahafatesan'ny vadiny malalany tamin'ny fanambarana am-bavany izay mivaky hoe: "Nifofofofo ny fanahiko ny alin'io. "Nodimandry tamim-pilaminana i Rebecca, vadiko mahafinaritra, taorian'ny ady an-trano tamin'ny kanseran'ny Royal Marsden any Londres. "Renim-pitiavana mahafinaritra ho an'ireo zanakay telo tsara tarehy izy. Ho very izy amin'ny maha-vady, anabavy, nenitoa, zanakavavy sy zafikely vavy. "Hiaina ao an-tsaintsika izy, ho mpitarika sy fitaomam-panahy."
Rio vao haingana no nanambara izay holazainy amin'i Rebecca raha toa ka mbola misy fotoana hafa miaraka aminy. Niseho tamin'ny dokambarotra am-pihetseham-po iray momba ny fahasimban'ny ankizy UK izy, hoy izy: "Raha afaka manana minitra iray hafa amin'i Rebecca aho, azoko atao angamba, raha ny marina, dia manontany tena aho momba ny zavatra tiany amin'ny ankizy mivoatra amin'ny dingana samihafa, fotoana manan-danja eo amin'ny fivelarany. "Te hilaza aminy aho fa tiako izy."
Rio Ferdinand Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fahafatesana taorian'ny fahafatesana
fandevenana Nodimandry i Rebecca taorian'ny lanonana manokana tao Kent tamin'ny volana 2015. Maro tamin'ireo mpiara-mianatra ny vadiny no nanatrika ny fandevenana, anisan'izany i Sir Alex Ferguson, lehiben'ny Manchester United. Ny hafa koa dia nanaja ny azy ireo: Robin van Persie, Edwin van der Saar, Nemanja Vidic ary Darren Fletcher. Ny serivisy dia nofaritana ho fankalazana ny fiainan'i Rebecca. Ny zanany telo dia mifidy ny mozika izay horaisina. Izy ireo irery no tavela irery miaraka amin'ny rainy. Raha mbola mahafantatra momba ny fahafatesan'ny reniny ireo zokiny roa lahy, ny zanaka lahitokana farany dia hanontany ny rainy fanontaniana maro momba ny reniny.
Ny fihetseham-pon'i Rio tamin'ny fahafatesany: Niaiky i Ferdinand fa nisotro toaka izy taorian'ilay fahafatesan'i Rebecca teo akaiky. Taorian'ny fahafatesana, niaiky i Rio fa ny azy "Nirodana ny tontolo" ary nivadika ho zava-pisotro misy alikaola izy tamin'ny voalohany, saingy mifantoka amin'ny maha-ray be fitiavana ny zanany
Amin'ny teniny ..."Alina ihany no afaka manafoana ahy. Matetika aho no mifoha eo anelanelan'ny 2-3am, rehefa mampihoron-koditra ny zanako ny zanako, ka miambina hatrany mandra-pahamaraina. " Ny fahafatesan'ny vadiny tamin'ny farany dia nanery ny hisotro ronono avy amin'ny baolina kitra.
Rio Ferdinand dia nodorana nandritra ny horonan-tsary momba ny famoahana ny vadiny
Ny horonantsary lavarangana navoaka tao amin'ny BBC One izay nahita an'i Rio 38 taona dia miresaka momba ny fiainany amin'ny maha-maty vady azy, ny mamanay ary ny dadany.
Ny fandaharanasa koa dia nanadihady ny fomba nanampian'ny ray aman-dreny ny alahelo sy ny fanohanany ny zanany - ary nizara ny fomba tokana ahafahany manohana marina azy ireo dia ny hanorina indray ny fiainany. Rio koa dia nihaona tamin'ny ray aman-dreny hafa izay niady tamim-pahoriana ary nanazava ny tolona nataony manodidina ny fanandramany hitondra ny zanany telo irery.
Rio Ferdinand Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fifandraisana vaovao
Vao haingana, nitatitra ny fifandraisan'i Rio Kate dia teo amin'ny fifandraisany tamin'i Kate Wright kintana teo aloha ary ny mpivady dia nifampizara zava-pisotro misy alikaola tany Londres. Kate dia tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny fo torotoro Ferdy.
Ny mpivady dia naniry ny hitazona ny fiarahan'izy ireo tsy ho eo an-toerana. Nataon'i Kat ihany koa ny famelabelarana ny fahitalavitra Essex taorian'ny herinandro maromaro.
Rio Ferdinand Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ity ny fianakavian'i Rio Ferdinand izay ahitana ny ankamaroan'ny fianakaviany. Ny sary dia nampiseho an'i Sian (faharoa avy eo ankavanana) mametraka ny antsasany amin'ireo rahalahiny Rio sy Anton (havia havia sy havanana), rahalahy, ray ary reny (afovoany) miaraka amin'ny soratra.
izany 'anjarako mandrakizay' Vao haingana vao haingana ny sary no nandefasana ny mpikambana iray tao amin'ny fianakaviany. Ny renin'i Irlandy Rio Ferdinand, Janice Lavender dia namela ny fianakaviany tany am-piandohana tao amin'ny 50's.
Araka ny voalaza tetsy aloha, dia nanomboka ny fiarahany tamin'i Julien Ferdinand, izay avy any St. Lucia, fony izy zatovo, ary nanan-janaka roa izy ireo, Rio sy Anton. Ny fisarahana no niteraka ny anaram-pianakavian'i Lavender. Samy nipetraka tao amin'ny toeram-pivarotana iray tao Peckham izy ireo ary tsy nanambady mihitsy. Taorian'ny fisarahan'izy ireo, dia nanambady an'i Peter St Fort i Janice ary niaraka taminy i Sian sy i Jeremie zanany.
Rio dia nanandratra an'i Janice teo aloha "Supermum" ary hoy izy "Niompy sy nodiovina, ary nampiakatra ny lanitra sy ny tany mba hahazoana antoka fa tonga tany an-tsekoly na zatovolahy tanora izaho sy Anton zandriko". Ny renin'i Ferdy dia niaritra fanavakavaham-bolonkoditra nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny rainy. Araka izay ambaran'i Ferdy azy..."Rehefa nampiaraka izy ireo dia handratra amin'ny maman ny mpandalo satria mivoaka miaraka aminà lehilahy mainty izy. "
Ny renin'i Rio Ferdinand Janice St Fort dia nofaritana ho 'reny feno fanoloran-tena' ary 'aingam-panahy. Tao amin'ny 2017, maty izy taorian'ny ady tamin'ny kansera. Nofaritana izy Ny 'chef de la famille' Janice St Fort dia taona 58 fony izy maty tany amin'ny hopitaly niaraka tamin'ny fianakaviany teo am-pandriana. Talohan'ny nahafatesany, i Janice Lavender indray dia nihanahazo vahana rehefa nijery ireo zanany lahy nirotsaka an-tsokosoko tamin'ny laharan-dalamby iray niaraka tamin'i John Terry, kapitenin'i Angletera taloha.
Anton Julian Ferdinand (born 18 February 1985) dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pirenen'i Southend United. Tahaka ny rahalahiny, izy dia vokatry ny akademia West Ham United. Voalaza fa nanala baraka izy nantsoina hoe mpiaro an'i Queens Park Rangers Anton 'a ****** black c ***' nandritra ny lalao tamin'ny oktobra 23 tamin'ny taon-dasa.
anabavy Ny antsasaky Ferdinand dia; Sian (havia afovoany), Chloe (afovoany ankavanana), Anya (havia havia) sy Remi Ferdinand (havia havia). Sian dia tsara tarehy kokoa noho ny hafa.
Rio Ferdinand Childhood Story Plus Untold Biography Facts -fanavakavahana
Indray mandeha, indray mandeha ny Derbyshire Police no nilaza fa nanadihady ny Tweet voalohany tao Rio Ferdinand taorian'ny nahazoany fitarainana avy amin'ny mponin'ny vahoaka.
Ny dikan'ny teny hoe 'choc ice' dia midika hoe midika hoe 'mainty eny ivelany, fotsy amin'ny ao anatiny'. Taorian 'ny fitondran'ny FA, ​​dia nanao hetsi-panoherana manokana ireo rahalahy tamin'ny tsy nety nanao T-shirts ho fanohanana ny fanoherana fanavakavaham-bolonkoditra Kick it Out.
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Video Appearance
Tao amin'ny 2000, i Ferdinand dia nipoitra fohy tao anaty horonan-tsary miharihary tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana ao Ayia Napa ao Sipra ary niaraka tamin'ireo mpilalao baolina anglisy anglisy Kieron Dyer sy Frank Lampard. Channel 4 dia nanolotra horonantsary fohy toy ny ampahany amin'ny fanadihadiana X *UMX S * x, Footballers sy Videotape, ary nilaza fa nampiasaina izy io "Ampahatsiahivo ny mpijery fa mifototra amin'ny tena fiainana" izany.
Tao amin'ny 2002, nandritra ny fitsarana momba ny fanolanana an'i Martin King, fantatr'i Ferdinand sy Leeds mpiara-miasa tamin'i Michael Duberry, dia nandà ny fiampangany fa nanosihosy an'i Duberry ilay vehivavy ary nandrahona azy i Ferdinand tao amin'ny toeram-pisakafoanana alina tao Leeds tamin'ny alin'ny 22 Janoary, Fanamarihana fanampiny momba ny fimamoana sy ny fimamoana. Samy nanadinadinin'ny polisy ny lehilahy roa saingy nanambara tamin'ny April 2003 ny Sampam-pitsarana momba ny Fampanoavana fa tsy hiatrika fiampangana izy ireo. Ny mpanjaka dia hita fa meloka tamin'ny fanafihana tsy mendrika ary nanandrana nanolana.
Nandritra ny fanadihadiana nataon'ny radio tamin'ny The Chris Moyles Show tamin'ny oktobra 2006, dia nahasarika mpihaino sy tsikera roa i Ferdinand avy amin'ny mpanentana ny zon'ireo pelaka Peter Tatchell rehefa niantso an'i Moyles ho mpilalao izy ary narahan'ny "Miala tsiny, malahelo aho, miala tsiny. Tsy homophobic aho", Rehefa nilaza tamim-pitiavana i Moyles fa homosexuel izy. Ny BBC Radio 1 dia nanaisotra ny fifanakalozana ho toy ny fanangonana, raha nilaza i Tatchell "Satria niala tsiny avy hatrany [am-pifaliana] izy, faly mankasitraka ny alahelony aho ary mamela izany amin'ny".
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Ashley Cole Feud
John Terry dia tsy hita fa meloka noho ny fanavakavaham-bolon-koditra tamin'ny raharaha momba azy sy ny an'i Anton rahalahiny. Taorian'ny didim-pitsarana, Rio Ferdinand dia niteraka adihevitra momba ny media tamin'ny fanehoana fialantsiny tamin'ny fanehoan-kevitry ny mpisera Twitter iray izay nanondro an'i Ashley Cole, izay nijoro ho vavolombelona tamin'ny fanomezan'i Terry, "Choc glas", Anarana iombonana amin'ny teny japoney Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny japoney "Mainty any ivelany, fotsy amin'ny ao anatiny".
Namafa ny sioka i Ferdinand fotoana fohy taorian'izay ary nolavina choc ice dia teny fanavakavaham-bolonkoditra, manampy, "Ary raha te hihomehy aho dia misy olona mandefa bitsika ... .I! Hahahahaha! Atsaharo ny fihazakazakazaka ataonao! " Ireo mpisolovava an'i Cole dia namoaka fanambarana ho setrin'izany, ary nilaza fa tsy handray ny raharaha intsony izy. Ny tenan'i Ferdinand dia voaheloka "Tsy misy dikany sy tsy misy dikany" ny lehiben'ny PFA Clarke Carlisle.
Tamin'ny volana 2012 tamin'ny volana Aogositra, i Ferdinand dia nomelohin'ny £ 45,000 noho ny fanamarihany tao amin'ny Twitter taorian'ny nanambaran'ny Vaomiera mahaleo tena azy fa meloka amin'ny famoahana ilay lalao ho diso "Dratsy" fanehoan-kevitra "Misy soratra momba ny fiaviana, volon-koditra na firazanana."
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Jamaican bash
Tamin'ny volana 2014 tamin'ny Oktobra, dia voampanga indray ny FA noho ny fampiasana fiteny manafintohina ao amin'ny Twitter, rehefa avy niresaka tamin'ny renin'ny mpitsikera iray izy "Sket", Jamaikana teny janga iray ho an'ny vehivavy manevateva. Ferdinand dia nomelohina £ 25,000 noho ny fandikan-dalàna ary voarara tsy hilalao lalao telo. Ny FA dia nihevitra ny toeran'i Ferdinand ho "Modely ho an'ny anjara andraikitra" ho fanamafisana ny sazy an-tranomaizina, ankoatra ny fanamelohana an'i Twitter faharoa tao anatin'ny telo taona. Fanamarihana: Tsy nisy na oviana na oviana nanaiky hanao ratsy.
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Gambling
Tamin'ny volana 2015 dia nanambara izy fa i Ferdinand no endrika vaovao amin'ny Casino Casino Floor Online. Ny fanambarana dia niteraka fanakianana mahery vaika tao amin'ny Twitter tamin'ny mpanaraka azy marobe, izay nanolo-kevitra fa tsy mety ny modely ho an'ny tanora manohana ny filokana, indrindra noho ny tolona voamarina amin'ny ankamaroan'ny namany izay nandrodanan'ny filokana.
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Kick Boxing
Raha vantany vao nipoitra tamin'ny baolina kitra tao amin'ny 2015 ny kintan'ny Manchester United taorian'ny sangodim-pananana nasehony dia nanomboka nanopy maso tamin'ny ady matihanina tamin'ny ady baolina iray izy taorian'ny nanaovany fanambarana nahamenatra ho fanoherana ny asany. Ity vaovao ity dia tonga roa taona monja taorian'ny namoahan'i Rio ny vadiny tamin'ny homamiadana.
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Ravao ny tantara
Tamin'ny volana Martsa 2003 dia nomena fandrarana enim-bolana i Ferdinand noho ny fiakarany ambony haingana. Nomena £ 2,500 ary sazy enina izy ho an'ny fiarandalamby 92 mph (148 km / h) eo amin'ny M1.
Tamin'ny volana 2005, notsikerain'ny mpitsara iray izy rehefa nahazo fandraràna fahaefatra tamin'ny fiara sy ny sazy tamin'ny £ 1,500, taorian'ny nahazoan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana "Nandeha an-tongotra 105.9 kilometatra (170.4 km / h) mahery ny halavirana efa ho roa kilaometatra" eo amin'ny seranan'i M6. Rehefa nametraka ny sazy i Ferdinand dia nanambara ilay mpitsara "Tokony ho modely tsara ho an'ny tanora eo amin'ny fiaraha-monina ary tsy manome ny hafatra marina izany."
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold -Artist
Ao amin'ny 2005, i Ferdinand, miaraka amin'ny namana iray ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, dia namorona ny mari-tsoratra "White Chalk Music". Hatramin'izao, misy mpanakanto roa nosoniavina tao amin'ilay marika: Melody Johnston sy Nia Jai. Ity farany dia namoaka rakikira tamin'ny 6 October 2010, izay mampiseho an'i Ferdinand mihiaka.
Ny tsara indrindra, dia nametraka ny loha-hevitra voalohany tao amin'ny sarimihetsika sinema tamin'ny faran'ny 2008, ny famatsiam-bola ary lasa mpamokatra mpanatontosa ny sarimihetsika nataon'i Alex de Rakoff, Dead Man Running. Ny sarimihetsika dia manasongadina Danny Dyer sy 50 Cent amin'ny teti-pandihizan'ny gangster. Ferdinand dia hizara ny famokarana lozisialy amin'ny ekipa mpilalao an'i Angletera Ashley Cole.
Ao amin'ny 2008, nandrakitra horonan-tsarimihetsika momba an'i Peckham i Ferdinand, nikasa handresy lahatra ireo tanora hiala amin'ny fiainana heloka.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Rio Ferdinand momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Ny tantaran'i Ainsley Maitland-Niles momba ny tantaram-pianakaviana dia mbola tsy voatanisa momba ny tantaram-piainana
Rob Holding the Story of the Child Plus Plus Taken Biography
Marouane Fellaini tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra